သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်
Posted by mandalarthu on Dec 20, 2011 in Buddhism, Creative Writing, My Dear Diary | 8 comments
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်
မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်ကိုမူ အရှင်သာရိပုတ္တရာ၏ တပည့်ခေမာ ရဟန္တာသည် ဘုရားရှင်၏အလောင်းတော်ကို တေဇောဓာတ်လောင်ကျွမ်းနေစဉ် စန္ဒကူးနံ့သာ ထင်းပုံထက်မှ ဆောင်ယူကာ ဇမ္ဗူဒိပ်ကျွန်း၊ ကလိင်္ဂတိုင်း၊ ဒန္တပူရ (Dantapura) ပြည့်ရှင်ဗြဟ္မဒတ် မင်းအား ပေးအပ်ကိုးကွယ်စေသည်။ ထိုစွယ်တော်မြတ်ကို ဒန္တပူရမြို့တွင် နှစ်ပေါင်း (၈ဝဝ) ကျော် သည့်တိုင် မင်းဆက်ဆက် ပူဇော်ကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။
*******သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော် ပုံ (၁၉၂၀)*******
*******သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်*******
ကလိင်္ဂ၏အရှင်သခင် ဂုဟသိဝမင်း (Guhasiva) လက်ထက်တွင် စွယ်တော်ကို အကြောင်းပြု၍ စစ်ဖြစ်လေ၏။ ဂုဟသိဝမင်းသည် စစ်ပွဲအတွင်း ပျောက်ဆုံးမှုအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင် နိုင်သဖြင့် သီရိလင်္ကာကျွန်းမှ သူ၏အမွေတော် မဟာသေန (Mahasena) မင်းထံသို့ စွယ်တော်မြတ်ကို ပို့ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်လေ၏။ မဟာသေနမင်းသည်ကား ခေတ်သီရိမေဝံ (Kitsirimevan) ခေါ် ကိတ္တိသီရိမေဃဝဏ္ဏ၏ ခမည်းတော်ဖြစ်သည်။ထို့နောက် ပုဟသိဝမင်း စစ်ရှုံးသည့်အခါ ကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း တူသမက်တော် ဥဇ္ဇေနီမြို့စား ဒန္တကုမာရ (Danta Kumera) မင်းသားနှင့် သမီးတော် ဟေမာမလ (Hemamala) မင်းသမီးတို့အား ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်စေလျက် စွယ်တော်ကို အပို့လွှတ်လေသည်။ သို့ဖြင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ရာစုခေတ် ရှစ်ခုခန့် စံပယ်တော်မူခဲ့သော စွယ်တော်မြတ်ကို ဒန္တကုမာရမင်းသားနှင့် ဟေမာမလ မင်းသမီးတို့ (၄) ရာစုခေတ်၊ ဒုတိယပိုင်းတွင် ဒန္တပူရ လျှို့ဝှက်စွာ ပင့်ဆောင်သယ်ယူခဲ့ကြပါသည်။
*****ဗုဒ္ဓဧ။် မြတ်စွယ်တော်ကြုပ်၊ ကန္နီမြို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ*********
ယခု သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကန္ဒီမြို့(Kandy) တွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိနေသော စွယ်တော် မြတ်သည် အိန္ဒိယပြည် ကလိင်္ဂ (Kalinga) မင်းတို့၏ နိုင်ငံမှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လက်ဝဲအောက်စွယ်တော် မြတ်ဖြစ်၍ သီရိလင်္ကာကျွန်း သို့ ပို့ဆောင်လွှဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။
သီဟိုဠ်ဘုရင် အဆက်ဆက်တို့နှင့် တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အပူဇော်ခံယူခဲ့ရာ ခရစ်နှစ် ၁၅၉၂ ခုနှစ်၊ ပထမ ၀ိမလဓမ္မသူရိယမင်းသည် ယခု ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်တိုက်ကို တည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယခုတိုင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကန္ဒီမြို့ စွယ်တော် ကျောင်း၌ ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိပါသည်။
**** မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လက်ဝဲအောက်စွယ်တော် ကိန်းဝပ်စံပယ်၇ာ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကန္ဒီမြို့ စွယ်တော် ကျောင်း ***
*******သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ၊ ကန္နိမြို့ ဒါလာဒမာလိဂါဝ ကမ္ဘာကျော် စွယ်တော်တိုက်ကြီး*********
စွယ်တော်မြတ် ကိန်းဝပ်တော်မူရာ ကန္ဒီမြို့
ကန္ဒီမြို့သည် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၊ ကိုလံဘိုမြို့မှ အရှေ့မြောက်ဘက် (၇၅)မိုင်၊ (၁၁၆) ကီလိုမီတာ အကွာတွင်ရှိသည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၄၆၅) မီတာအမြင့်တွင်ဖြစ်ပြီး၊ တောတောင် လျှိုမြောင်၊ မြစ်ချောင်း၊ ရေကန်၊ ရေတံခွန်များဖြင့် သာယာလှပ၏။ မြို့အောက်ခြေ တွင် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးဖြစ်သည့် မဟာဝေလိမြစ်စီးဆင်းနေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ မြတ်နိုးကိုးကွယ်ဦးညွတ်ရာ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်မြတ် (Toothrelic) ကိန်းဝပ် စံပ္မာယ်တော်မူနေသည့် ဒါလာဒမာလိဂါဝ (Kandy Dalada Maligawa) အမည်ရှိ ကမ္ဘာကျော် စွယ်တော်တိုက်ကြီးကား မြို့၏ဂုဏ်ဆောင်ဖြစ်လေသည်။
*******ကန္ဒီမြို့ဗုဒ္ဓစွယ်တော်တိုက် နှင့် ကျုံးဧ။်၇ှုခင်း ***********
စွယ်တော်မြတ်သည် သီဟိုဠ်ဘုရင် အဆက်ဆက်တို့နှင့် တိုင်းသူပြည်သားတို့၏ အပူဇော်ခံယူခဲ့ရာ ခရစ်နှစ် ၁၅၉၂ ခုနှစ်၊ ပထမ ၀ိမလဓမ္မသူရိယမင်းသည် ယခု ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်တိုက်ကိုတည်ဆောက် ကိုးကွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ စွယ်တော်မြတ်သည်ယခုလက်ရှိဖြစ်သော ကန္ဒီမြို့မှခန်းနားတင့်တယ်လှပစွာသောဒါလာဒမာလိဂါဝစွယ်တော်တိုက်ကြီးတွင်သာ ကိန်းဝပ်စံပ္မာယ်သီတင်းသုံးလျက်နေတော်မူသည်။ သီရိလင်္ကာကျွန်း၏တန်ခိုးအကြီးဆုံးနှင့်ကြည်ညိုလေးမြတ်ဖွယ်အကောင်းဆုံး ဓာတ်တော်မှာလည်း ဤစွယ်တော်မြတ် (The Sacred Tooth Relic) ပင်ဖြစ်သည်။ စွယ်တော်တိုက်ကို ကာရံထားသော မဟာတံတိုင်းမှာ (၁၅) ပေခန့် မြင့်သည်။ တံတိုင်းနှင့် စွယ်တော်တိုက်ကို ခြားထားသော ကျုံးမှာ အကျယ် (၁၅) ပေ၊ အနက် (၁ဝ) ပေဖြစ်သည်။
*******သာယာလှပ ရှုမောဖွယ် ကန္နီ မြို့ ကျုံးနှင့် ရှု ခင်း အလှ *************
********ဒါလာဒမာလိဂါဝစွယ်တော်တိုက်သို့အ၀င် **********
**ဒါလာဒမာလိဂါဝစွယ်တော်တိုက်သို့အတွင်းရှိ နံရံပေါ်တွင် ထွင်းထုပူဇော်ထားသော ဆင်ပုံ ၇ုပ်ကြွ များ****
***ကန္နီမြို့ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်တိုက်မှ ဆင်စွယ်များ ၀န်းရံ ထားသော အောက်ထပ်ရှိ မြတ်ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်****
***ကန္နီမြို့ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်တိုက်မှ ဆင်စွယ်များ ၀န်းရံ ထားသော မြတ်ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော်****
**********ကန္နီမြို့ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်တိုက်မှ ဆင်စွယ်များ ၀န်းရံ ထားသော ဒုတိယ အဆင့် *********
စွယ်တော်ကြုတ်ကြီး (Relic Casket) မှာ (၇)ထပ်ရှိပြီး ကြုတ်အားလုံးကို ရွှေသား စစ်စစ် ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ အပြင်ဖက်ကြုတ်၏အကျယ်သည် လုံးပတ် (၆)တောင်နှင့် အမြင့်(၄) တောင်ဖြစ်၏။ အတွင်းဖက်အကျဆုံးကြုတ်မှာ လုံးပတ် (၆) လက်မ၊ အမြင့် (၂)လက်မခွဲ ရှိသည်။အလယ်ကြုတ်များတွင် သော့သုံးချက်စီ ခတ်ထားကြသည်။
*******ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်တိုက်မှ မြတ်စွာဘု၇ားဧ။် စွယ်တော်ကြုတ်************
*****သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်မြတ်********
ကန္ဒီမြို့ရှိ စွယ်တော်မြတ်၏ အတိုင်းအတာများမှာ အရှည်(၁)လက်မ (၃)မတ်၊ လုံးပတ် (၅) မူးလုံးခန့်ရှိသည်။ အဆင်းတော်မှာ နီကျင်ကျင်ရှိသည်။ စွယ်တော်မြတ်၏ အရင်းပိုင်းမှာ ငုံးတိတိ ဖြစ်လျက် ဆင် စွယ်သဏ္ဌာန် အနည်းငယ်ကွေးပြီး အဖျားသို့ သေးသွယ်သွားသည်။ အဖျားပိုင်း တွင်း အက်ကြောင်းများရှိပြီး၊ သေးငယ်သော အပေါက်တစ်ခုလည်းပါရှိသည်ဟု သိရပါသည်။
*****ကန္နီမြို့ စွယ်တော်တိုက်မှ မြတ်စွာဘု၇ားဧ။် စွယ်တော် မြတ် ၇တနာကြုတ်*****
စွယ်တော်မြတ်လေးဆူတို့တွင်သီရိလင်္ကာ(သီိဟိုဠ်)နိုင်ငံကန္ဒီမြို့တွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်သည့် လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်မြတ်ကား အထင်ရှားဆုံးပင်ဖြစ်၏။ စွယ်တော်မြတ်ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်လှည့်လည်အပူဇော်ခံသော်လည်းစွယ်တော်မြတ်ကိန်းဝပ်စံပယ်ရာ ရတနာကြုတ်ကိုမူ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖွင့်လေ့ဖွင့်ထမရှိပေ။လက်ဝဲအောက်စွယ်တော်မြတ်မှာရတနာကြုတ်အတွင်းဖန်ပေါင်းချောင်ထဲ၌ကိန်းဝပ်စံပယ်လျက်ရှိပါသည်။
***စွယ်တော်လှည့် လည် အပူဇော်ခံပွဲတွင် မီးသီး မီးပန်းကုံးများ ထိန်ထိန်လင်းအောင် ထွန်းညှိပူဇော်ထားပုံ ***
**ေ၇ာင်ဝါထိန်လင်း ရှုမငြီးသည့်ဆင်များဖြင့် ပင့် ဆောင်လာသော မြတ်စွယ်တော်လှည့် လည် အပူဇော်ခံပွဲ **
(၀ါခေါင်လဆန်း၆၇က်နေ့မှဝါခေါင်လပြည့်နေ့ထိ)ဆယ်ရက်တိုင်တိုင်လှည့်လည်ပူဇော်ပွဲ ကျင်းပကြပါသည်။စွယ်တော်လှည့်လည်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ လာပြီးငေးယူရလောက်အောင် အလွန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားစည်ကားလှပါသည်။ ဆင်အကောင်ပေါင်း (၇၀)ကျော်နှင့် ဒေသခံ
အဖွဲ့ အစည်းအသီးသီးတို့ ဧ။် မခေါက်ဗျောအက၊ ပန်းဖွားအက ၊မီးဝိုင်း အက စသည့် အတီးအမှုတ်
အက အခုန် များစုံလင်စွာဖြင့်လှည့် လည်ကြပါသည်။
*****ဆင်များဖြင့် ပင့် ဆောင်လာသော မြတ်စွယ်တော်လှည့် လည် အပူဇော်ခံပွဲ *******
****ပန်းဖွားအက ၊မီးဝိုင်း အက ကို စွယ်တော်ပင့် ဆောင်ပွဲတွင် ၇င် သတ်၇ှုမောဖွယ် မြင်တွေ့ ၇ပုံ *******
*****စွယ်တော်ပင့် ဆောင်ပွဲတွင် ၇င် သတ်၇ှုမောဖွယ် မြင်တွေ့ ရသော မီးဝိုင်း အက*********
စွယ်တော်တိုက်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် အဆောက် အဦ သစ်ပင်တို့ ၌ မီးသီး မီးပန်းကုံးများ ထိန်ထိန်
လင်းအောင် ထွန်းညှိ ထားသည်မှာလည်း ရှုမငြီး အောင် လှပပါသည်။
စွယ်တော်မြတ်ကိုမူကား သုံးနှစ်မှသာ တစ်ကြိမ်ဖွင့်ပြီး ဒိဋ္ဌမျက်မြင်ဖူးခွင့်ပြုသည်ဟု သိရပါသည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်သည် စွယ်တော်မြတ်အစစ်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်ဖူးမြင်ရမည့်နှစ် ဖြစ်ပေ သည်။
အထက်၌ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဘုရားရှင်၏ လက်ဝဲအောက် စွယ်တော်ဓာတ်မြတ် လုံခြုံရေးအတွက် ဆင်စွယ်အတွင်း ဖုံးအုပ်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်၍ ဘုရားဖူးများဖူးမြင်နေရသော စွယ်တော်ဓာတ် မြတ်မှာ မူလပုံစံအတိုင်း မဟုတ်တော့ပေ။
သီဟိုဠ်နိုင်ငံ(သီ၇ိလင်္ကာ) မှ မြတ်စွယ်တော်အစစ်
အစစ်သည် အောက် ပါအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံသုိ့ ယာယီကြွချီတော်မူလာခဲ့ပါသည်။
သီဟိုဠ်နိုင်ငံ(သီ၇ိလင်္ကာ) မှ စွယ်တော်
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၆ဝ၊ အေဒီ ၁၈၉၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ရဟန်းပြည်သူများ သီဟိုဠ်
နိုင်ငံသို့ ဘုရားဖူးသွားရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ စွယ်တော်ပင့်ဆောင် ပူဇော်လိုကြောင်း၊ စွယ်တော် ကျောင်းမှ ဘုန်တော်ကြီးများကို လျှောက်ထားခဲ့ကြရာ သဘောတူခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ စွယ်တော်ပင့် ဆောင်ရန် ရွှေကြုတ်တော်ကို ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် သီဟိုဠ်ဘုန်းတော်ကြီး ဝိမလဓိရတိဿနှင့် သီလာ ရတနာတိဿဦးဆောင်ပြီး စွယ်တော်ကို သင်္ဘောဖြင့် ပင့်ဆောင်လာခဲ့ကြပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆူးလေ ကုန်းတွင် ကိန်းဝပ်အပူဇော်ခံခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ပုဇွန်တောင် မဟာဝိဟာရကျောင်း ဓမ္မာရုံ၌ ပင့်ဆောင်ဖူးမြော်ကြသည်။
ပဲခူးမြို့သို့မီးရထားဖြင့်ဆက်လက်ပင့်ဆောင်ရာမြို့တွင်းတွင်လှည့်လည်အပူဇော်ခံသည်။ ရွှေမော်ဓောဘုရားကုန်းတွင် ကိန်းဝပ်တော်မူသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် မန္တလေးမြို့သို့ ပင့်ဆောင်ကြ သည်။ မန္တလေးမြို့တွင် မဟာလောကရံသီအိမ်တော်ရာဘုရားတွင် အပူဇော်ခံသည်။ လမ်းတစ် လျှောက်လုံး အပူဇော်ခံခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးမှ မီးရထား၊ မီးသင်္ဘောတို့ဖြင့် ပင့်ဆောင်ကြပြီး မော်လူး၊ မိုးညှင်း၊ မိုးကောင်း၊ ဗန်းမော်နှင့်ကသာမြို့များသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းမြို့အသီးသီးတို့တွင် အပူဇော်ခံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ပင့်ဆောင်ခဲ့ပြီး သီဟိုဠ်ကျွန်းသို့ မီးသင်္ဘော ဖြင့် ပြန်လည်ပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်။
သီဟိုဠ်(သီ၇ိလင်္ကာ) မှ စွယ်တော်မြတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိစွယ်တော်ပွားများ
ထင်ရှားလှသော စွယ်တော်ပွားများ ဌာပနထား၍ တည်ထားသော ရှေးကောင်းမှုတော် စေတီတို့မှာ
၆။ ပဲခူး မဟာစေတီတော်၊
၇။ စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော်စေတီ၊
၈။ မန္တလေး နန်းတွင်းစွယ်တော်စင်
တို့မှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော်နှင့် ဗုဒ္ဓစွယ်တော်ပွားများကို ဌာပနာထား၍ တည်ထားသော စေတီတော် များ ဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိစေတီအတော်များများတွင် ဌာပနာထားသော စွယ်တော်ပွားအများစုမှာ သီဟိုဠ်စွယ်တော်မြတ်မှပွားယူလာသောစွယ်တော်များဖြစ်သည်ကိုတွေ့၇သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် စွယ်တော်ဌာပနာထား၍ တည်ထားသော စေတီတော် အတော်များများရှိပေရာ အထက်၌ ဖော်ပြထားသည့် စေတီတော်တို့မှ ထင်ရှားသော စေတီတော် တချို့ကိုသာ ဖော်ပြထား ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
စွယ်တော်ဓာတ်မြတ်ကို ဖူးမြော်အပ်သည့် အကျိူးထူးများ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းရှင်လူများ ပြည်သူတုိ့သည် မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်၊ မွေတော်များကိုအထွတ်အမြတ်ထား၍ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသည်။ယင်းသို့ကိုးကွယ်ပူဇော်ဖူးမြော်ရသည်ကို ကုသိုလ်ထူး၍သာ ဖူးမြော်ထိုက်သည်ဟု ကျေနပ်အားရပီတိ ဖြစ်ကြရသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ စွယ်တော်ဓာတ်မြတ်ကို ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းအားဖြင့် မည်သို့သော အကျိုးထူးများ ခံစားရရှိနိုင်ပုံကို မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူခါနီး၌ မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ သည်ကို ပရိနိဗ္ဗာနသုတ်တော်၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပေသည်။
“ငါဘုရား၏ အလောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာ သင်္ဂြိုဟ်အပ်၏။ ဓာတ်တော်တို့ကိုလည်း ခရီး ဆုံရာ၌ ကောင်းစွာ စေတီတည်အပ်၏။ ထိုစေတီတော်ကို ပူဇော် ချီးမြှောက်ရသော လူ၊နတ်အများ တို့သည် စီးပွားချမ်းသာ လွန်စွာ ဖြစ်ကုန်လတံ္တ့။
ချစ်သား အာနန္ဒာ၊ စေတီတည်ခြင်းငှာ ထိုက်တန်သော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကား ငါဘုရားလည်း တစ်ပါး၊ ပစ္စေကဗုဒ္ဓါလည်းတစ်ပါး၊ ရဟန္တာလည်းတစ်ပါး၊ စကြ၀တေးမင်းလည်းတစ်ပါး၊ ဤလေးပါး သာတည်း။
အကြင် ဒါယကာတို့သည် ‘သစ္စာလေးပါးတရားတို့ကို အလိုလို သိမြင်တော်မူရသော သဗ္ဗညုတဘုရား၏ သရီရဓာတ်တော်တည်ရာပေတကား’ ဟု စေတီ၌ ကြည်ညိုခြင်း၊ လေးပါးခြင်း ကို ဖြစ်စေကုန်လတံ္တ့၊ အထူးထူးသော ပန်း၊ နံ့သာ၊ ပူဇော်ရာဝတ္ထုတို့ဖြင့် ငါဘုရားဂုဏ်ကို အာရုံပြု၍ ပြုပြင်ချီးမြှောက်ကုန်လတံ္တ့၊ ထိုဒါယကာတို့သည် ဤကြည်ညိုသော စေတနာကြောင့် ခန္ဓာပျက် ကြွေသောအခါ နတ်ရွာသုဂတိဘ၀သို့လည်း တက်ရကုန်လတံ္တ့၊ သူဌေးသူကြွယ်၊ ပဒေသရာဇ် စသော လူကောင်းလူမြတ်တို့၏ စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုလည်း ရလတံ္တ့”
ဟူ၍ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူခါနီး၌ မှာကြားတော်မူခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင်၏ စွယ်တော်ဓာတ်မြတ်ကို အလေးထား၍ ဖူးမြော်ကြည်ညိုခဲ့သော် လူ၊ နတ်ချမ်းသာကို အမှန်ပင် ရရှိခံစားရမည်ဖြစ်ပေသည်။ နောင်သံသရာ၌သာမက မျက်မှောက်ဘ၀၌ပင် ကောင်းကျိုး ချမ်းသာကို ခံစား၊ စံစားနိုင်ပေသည်။
တာပိ ၀န္ဒာမိ ဓာတုယော။
ဧကာဒါဌာ – အထက်လက်ယာ စွယ်တော်ဓာတ်တစ်ဆူသည်၊
တာဝတိံသေ – တာဝတိံသာနတ်ပြည်၌၊
တိဋ္ဌတု – တည်နေကိန်းဝပ်တော်မူ၏
ဧကာဒါဌာ – အောက်လက်ယာ စွယ်တော်ဓာတ်တစ်ဆူသည်၊
ဘုဇဂပူရကေ – နဂါးပြည်၌၊
ဧကာဒါဌာန – အထက်လက်ဝဲ စွယ်တော်ဓာတ်တစ်ဆူသည်၊
ဂန္ဓာရေ – ဂန္ဓာရတိုင်း၌ (တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ)၊
တိဋ္ဌတု – တည်နေကိန်းဝပ်တော်မူ၏။
ဧကာဒါဌာ – အောက်လက်ဝဲ စွယ်တော်ဓာတ်တစ်ဆူသည်၊
ဒန္တပူရမှိ – ကလိင်္ဂတိုင်း ဒန္တပူရပြည်၌ (ယခုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံ)၊
တိဋ္ဌတု – တည်နေကိန်းဝပ်တော်မူ၏၊
တာပိဓာတုယော – ထိုတိုင်းပြည်နိုင်ငံ ဒေသဌာနတို့၌ တည်နေကိန်းဝပ်တော်မူ သော စွယ်တော်လေးဆူတို့ကို၊
အဟံ – အကျွန်ုပ်သည်၊
၀န္ဒာမိ – ဦးခေါင်းညွတ်ကျိုး လက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးပါ၏ ဘုရား။
အထက်ပါ စွယ်တော်လေးဆူအား ရှိခိုးပူဇော်သော ဂါထာတော်မြတ်ကို ယခု ကြွရောက် နေသည့် တ၇ုပ်ပြည် စွယ်တော်ဓာတ်မြတ်ရှေ့၌ (၁၀၈) ခေါက် ရွတ်ပွားပူဇော်သော် ရွတ်ပွားပူဇော်သူအနေနှင့် အကျိုးထူးများ ခံစားရပေမည်။
တရုတ်ပြည် စွယ်တော်ဘုရားရှိခိုး ‘ဂါထာ’ ကိုလည်း တရုတ်ပြည်မှ ကြွရောက်တော်မူမည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်၏ အထက်လက်ဝဲ စွယ်တော်ဓာတ်မြတ်ရှေ့၌ (၁၀၈) ခေါက် ရွတ်ပွားပူဇော် သော် ပူဇော်သူအဖို့ အကျိုးထူးများ ပို၍ပင် ခံစားရပေမည်။ထိုအဓိဋ္ဌာန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံတော်မှ စွယ်တော် ဓာတ်မြတ် ကြွတော်မှုစဉ်ကာလနှင့် တိုက်ဆိုင်ချိန်၌ ပြုခဲ့သော် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သူအဖို့ ပို၍ အဓိဋ္ဌာန် ခရီးပြီးမြောက်ခြင်း၊ တောင်းသောဆုနှင့် ပြည့်ဝခြင်း စသည့် အကျိုးထူးများ ရရှိခံစားရမည်ဟု မလွဲ ဧကန်ဖြစ်သည်။
စွယ်တော်မြတ်အစစ်ရှေ့မှောက်၌ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သော် ပို၍ အဓိဋ္ဌာန်အောင်မြင်ထမြောက်နိုင် သည်ကတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ စွယ်တော်မြတ်အစစ်ဖြစ်၍ ဟိတ်ဓာတ် ကြီးမားလှသလို အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သူအနေနှင့်လည်း မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ စွယ်တော်ဓာတ်မြတ် အစစ်ပါ လားဟူသော အသိစိတ်ကြောင့် အဓိဋ္ဌာန်ဝင်စဉ်၌ မြတ်ဘုရားကို အာရုံပြုရာတွင် ပို၍ အာရုံ၌ မြတ်ဘုရား၏ ပုံတော်မှာ ထင်မြင်လာမည်။ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ရာ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်များကို အာရုံ၌ပြုပြီးသော် စွယ်တော် ဓာတ်မြတ်လေးဆူအား အာရုံ၌ပေါ်အောင်ရှု၍ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်သော်လည်း အကျိုးထူးများ ရနိုင်ပေ သည်။
****** (ယခု မန္တလေးတွင် ဒေသစာ၇ီ ကြွချီ သီတင်းသုံး စံပယ်တော်မူနေသည့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏လက်ဝဲ အထက်စွယ်တော်မြတ်အား
ဓမ္မ ပူဇာ အဖြစ် ပူဇော်ပါသည်။)*****
၁။ ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော် (ဓမ္မဒါန)၊သာထွန်းပြန့် ဓမ္မ စာစောင် ၊သာသနာတော်ပြန့် ပွားေ၇းဦးစီးဌာန ။
အတွဲ(၁၇) အမှတ်(၃)၊၂၀၁၁ ခုနှစ၊် နိုဝင်ဘာလ ။
၂။ ဗုဒ္ဓမြတ် စွယ်တော်နှင့် စွယ်တော်လေးဆူ သမိုင်း ၊တက္ကသိုလ်မျိုး၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် (ပထမအကြိမ်)။
၃။မြတ်ဗုဒ္ဓဧ။် လက်ဝဲအောက် မြတ်စွယ်တော် နှင့် အရှင် က၀ိန္ဒာစာရ မထေရ်ကျော် ၊
မောင်သိန်းတန် (မာန်အောင်)၊ ရောင်ပြန် မဂ္ဂဇင်း ၊၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မေလ။
၄။ မခေါမသီ စိန်ကိုစီသို့ ၊ပြေညီသွားတော် ၊စွယ်တော်လေးဆူ ဆွတ်ဆွတ်ဖြူ သား ၊
ရန်မျိုးအောင် ၊ ရောင်ပြန် မဂ္ဂဇင်း ၊၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မေလ။
၅။မြတ်စွာဘု၇ားမြန်မာနိုင်ငံ သို့ ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူလာခြင်းနှင့် စေတီတော်များ သမိုင်း။
ဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်ဝင်း (ငြိမ်း) ၊၂၀၀၁ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ(ပထမအကြိမ်)။
၆။ အင်တာနက် သတင်း များ။
ကျေးဇူးပါဘဲ mandalarthu ဘု၇ား၇ှင်၇ဲ. စွယ်တော် နှင့် သီ၇ီလင်္ကာနိူင်ငံ၇ဲ. စွယ်တော်လှည်.လှည်ပွဲပုံ၇ိပ်များဟာအလွန်ကြည်ညိူလေးစားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်
ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင် (ပုံရော၊ စာပါ) ကြိုးစားပြီး တင်ပေးထားတဲ့ စေတနာကို လေးစား ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဖတ်ရှု့မှတ်သားသွားပါတယ် မန္တလာသူရေ။
တကယ်ကို မသိသေးတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို စုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သီရိလင်္ကာကို သွားဖို့ပြီးတော့ စွယ်တော်ဖူးဖို့တော့ အကြံထုတ်နေတာ ကြာပြီ။ ခရီးစဉ် အနေအထား သိပ်သဘောကျလှတာ မတွေ့သေးလို့ စောင့်ကြည့်နေတာပါ။ အခုလို တင်ပြပေးတဲ့ အတွက် မသွားဖြစ်ရင်တောင် သိသင့်သလောက် သိသွားပြီလို့ ယူဆပါတယ်။
စွယ်တော်အကြောင်း ဗဟုသုတ များစွာ
၇တဲ.အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ဒီဘုရားတွေထဲက မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ဘုရားတွေကတော့
၈။ မန္တလေး နန်းတွင်းစွယ်တော်စင် ဒီသုံးဆူပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို သေသေချာချာ ပုံလေးတွေဖူးမြော်နိုင်အောင်နဲ့ အကြောင်းအရာတွေ စုံလင်အောင် ရေးသားထားပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်။ သီရိလင်္ကာကိုလည်း ကြားပဲ ကြားဖူးပါတယ်။ တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးပါဘူး။ သွားရောက်ဖူးမြော်ချင်တာတော့ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဖြစ်နိုင်ရင် မဖူးဘူးသေးတဲ့ ဘုရားတွေအကုန်လုံးကို ဖူးမြော်ချင်နေမိပါတယ်။
မမ၊ ကိုဇေ နဲ့ ကိုဇော်မျိုးသူေ၇
ကျွန်မ ဒီ ပို့ စ်ကို တင်နိုင်ဖို့ (၄)ကြိမ် လောက်ကြိုးစားပြီ့း့ စိတ်ရှည်လက်၇ှည်နဲ့ တင်ခဲ့ ၇တာဖြစ်လို့ 
အခုလို မျိုး စိတ်ဝင်တစားဖတ်ရှု သွားတာသိ၇တဲ့ အတွက် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ကျွန်မ လဲ ယခင်က ဗုဒ္ဓစွယ်တော် အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ ပါဘူး။
တရုပ်ပြည်က စွယ်တော်ကို ငယ်စဉ်က (၂)ကြိမ် မန္တလေးမှာ ဖူးခဲ့ ၇ပေမယ့်အခုလို လေးလေးနက်နက် တန်ဖိုးထားဖူးမြော်ခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး။ စွယ်တော် အကြောင်း ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ လို့ ပါ။
အခုနှစ် မှစိတ်ဝင်စားဖတ်မိပြီး အများကို လဲ သိစေချင်လို့ ကိုယ်သိသလောက်လေး မျှဝေပေးတာပါ။
သီ၇ိလင်္ကာကို ကိုယ်တိုင်သွားေ၇ာက် ဖူးမြော်ခွင့် ကြုံ၇င်လဲ ကျွန်မတို့ က်ို ပြန်လည်မျှဝေပါဦးနော်။
သိချင်နေတဲ့အကြောင်းကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်…မန်းရွှေမြို့သူအား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုလို မျှဝေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးပါ။